LG Q60 a bịarutere n'oge na-adịghị anya n'etiti etiti [Nkọwapụta] | Gam akporosis
LG Q60 a bịarutere n'oge na-etiti etiti [AKWALKWỌ]
Anyị na-alaghachi na Androidsis site na nyocha akụkọ, ị maara na anyị chọrọ ịme ka ị mara maka ngwaọrụ ndị kachasị ọhụrụ a na-ebupụta na ahịa na mpaghara niile ka ị nwee ike ịnweta ozi kachasị ma tụlee ihe ndị ị maara nke ọma, oge a anyị na-eweta ị LG Q60, "etiti etiti" nke ga-enwe oge isi ike ịsọ mpi.
Chọpụta mgbe ahụ anyị niile gbasara LG Q60 ọhụrụ a yana ihe niile ịchọrọ ịma gbasara uru na ọghọm ya.
Ka ọ dị na mbụ, Ihe mbụ anyị kwadoro bụ na ị gafere vidiyo nke anyị hapụrụ n'elu nyocha a, Ma ọ bụghị otu ịgụ ịgụ nyocha nke njirimara ndị a karịa iji anya gị hụ ya, ọ bụ ya mere anyị ga-eji nwee ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị ga-enye anyị ihe yiri ya ma kesaa vidiyo ahụ wee nyere ndị Androidsis aka itolite. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị kwenyelarị, ị nwere ike ịzụta LG Q60 a na Amazon na ọnụahịa kacha mma (LG Q60 Dual Sim 3GB / 64GB ...njikọ »/]), egbula oge.
1 LG Q60 mpempe akwụkwọ
2 Nzube na ihe: Ihe omuma karia ihe omuma
3 Ese foto: ọnụọgụ ọtụtụ anaghị mma ...
4 Autonomy na arụmọrụ: Mmetụta mkpịsị aka
5 Multimedia na onye ọrụ ahụmahụ
LG Q60 mpempe akwụkwọ
Nka na ụzụ nkọwa LG Q60
Usoro njikwa Gam akporo 9 achịcha + LG Custom Layer
Ihuenyo Ogwe 6.26-anụ ọhịa FullVision na mkpebi HD + na nhazi 19: 9
Nhazi MediaTek Helio P22 na 2 GHz
GPU Ike VR GE8320
Nchekwa n'ime 64 GB (Gbasaa na microSD ruo 128 GB)
Igwefoto na-aga n'ihu 16 MP f / 2.2 + 5 MP + 2 MP Wide Angle - FHD ndekọ
Igwe n'ihu 13 MP FHD ndekọ
Njikọ GPS - Bluetooth 4.2 - WiFi 802.11ac - USB-C 2.0
Atụmatụ ndị ọzọ Ihe mkpisiaka mkpịsị aka - DualSIM
Batrị 3.500 mAh
Akụkụ 77 mm x 161 mm x 8.7 mm
Ahịa 240 euro
Na mpempe akwụkwọ LG Q60 a enweghị ihe ọ bụla, Mana ebe anyị bidoro nwewe obi abụọ bụ arụmọrụ nke igwefoto ya atọ, ọ nweghị ihe ọzọ na obere ihe, na-echebara na mmadụ abụọ n’ime ha bụ naanị 5 na 2 megapixels n’otu n’otu, gịnị ka nke a pụtara? Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere obi ike na Helio 22 nke MediaTek tinyere naanị 3 GB nke RAM, anyị agaghị emebi gị.
Nzube na ihe: Ihe omuma karia ihe omuma
Anyị hụrụ ọnụ nke mara mma nke ukwuu, anyị nyochachara ụdị acha anụnụ anụnụ ọ bụ ezie na a na-ere ya na ọcha. Ozugbo anyị buliri ya, anyị ghọtara na ọ dị «oke» obere maka ihe ọ na-azọrọ na ọ na-enye, nke ahụ bụ mgbe anyị hụrụ na anyị nwere igbe plastik agba, yana azụ nke otu ihe ahụ. Ha na-enwu nke ọma ma dị oke mma, mana anyị amatalarị ike na nkwụsi ike nke ihe ndị a. Bụrụ na ọ nwere ike, anyị nwere bọtịnụ atọ n'akụkụ aka ekpe, abụọ n'ime ha raara onwe ha nye olu na nke atọ nye Google Assistant, ebe akụkụ aka nri bụ naanị maka bọtịnụ ike. Na ala anyị nwere ọkà okwu siri ike tinyere ntinye 3,5mm Jack na microUSB dị ịtụnanya (ị gụrụ ya n'ụzọ ziri ezi).
Akụkụ: 77 mm x 161 mm x 8.7 mm
Ibu ibu: 155 grams
N'ihu anyị nwere a pụtara n'ụzọ dị ala etiti na a dobe-ụdị notch na elu akụkụ nke na-adịghị kwụpụta n'etiti akụkụ okpokolo agba. N'ihi na azụ a kenkowaputa plastic nke bụ ezigbo magnet maka akara ụkwụ (Ugbu a anyị ghọtara akwa onyinye ahụ), eserese atọ ahụ anaghị arụ ọrụ ọnụ yana ihe mmetụta mkpịsị aka kacha elu.
Ese foto: ọnụọgụ ọtụtụ anaghị mma ...
Foto onwe onye
Wide Angle AI
Anyị nwere ese foto atọ 16 MP f / 2.2 + 5 MP + 2 MP Wide Angle - FHD na-edekọ na-enweghị onye nrụpụta ọ bụla, nsonaazụ nke igwefoto ọkọlọtọ nwere foto "ọkọlọtọ" na-agbachitere onwe ya n'ọnọdụ ndị na-enwu gbaa, ihe gbanwere mgbe anyị chọrọ iji Wide Angle add-ons ma ọ bụ ọnọdụ ọkụ daa, nsonaazụ ahụ adịghịdị agbatị etiti, n'eziokwu ọ na-enye nsonaazụ kachasị njọ nke anyị nweworo ike ịnwale na ọnụahịa ya site na njedebe, nke doro anya na ọnụ ọnụ nke dị n'etiti 50 na 100 euro dị obere karịa Xiaomi's Redmi Note 7.
N'aka nke ọzọ, igwefoto n'ihu 13 MP dị ezigbo mma na-atụle ya dum, ọ na-ewe ezigbo eserese ọbụlagodi na eserese eserese, ihe anyị na - enweghị ike ikwu maka igwefoto azụ, na anyị amaghị eziokwu gafere isi LG iji mee igwe adịghị mma a na igwefoto.
Autonomy na arụmọrụ: Mmetụta mkpịsị aka
Nnwere onwe na-akwụ ụgwọ maka 3.500 mAh, ọ bụ ezie na iburu n'uche ọkpụrụkpụ, ọ tụrụ anyị n'anya na ha etinyeghị batrị ọzọ. Ya mere, anyị nwere ojiji nke na-abịa n'enweghị nsogbu na njedebe nke ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị anaghị achọ nke ukwuu, na-eburu n'uche mkpebi nke ihuenyo nwere ike ịka mma ọtụtụ.
Omume niile nke ngwaọrụ ahụ dị ntakịrị, Ọ ga-adaba na arụmọrụ nke njedebe dị ala ma anyị wepụrụ n'ụzọ doro anya ojiji nke egwuregwu vidiyo na-achọ dị ka PUBG, na vidiyo nke na-eso nyocha ahụ anyị na-ahụ FPS mgbe niile na-eweta obi nkoropụ. Onye na-agụ mkpịsị aka kwesịrị ka a kpọtụrụ aha iche, ọ na-adị nwayọ nwayọ ma ọ dabaghị na nke njedebe 2019, ọ fọrọ nke nta ka ị kwụsị inwe ọchịchọ iji ya.
Multimedia na onye ọrụ ahụmahụ
Anyị chọtara otu panel nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 6,3, IPS LCD nke na-enye ọtụtụ ntọala ntọala, ikekwe na-acha ọcha mgbe ụfọdụ. Ejiri ya ntakịrị maka nhazi ihuenyo ya na nsonaazụ na ijikọta mkpebi HD + O doro anya na ọ bụghị afọ ojuju, iji rie vidiyo ma jiri mkpebi nke na-akwado arụmọrụ nke sistemụ ma ọ bụ mee ka ọ dị ụtọ ikiri ihe nkiri na ya, mmeputakwa oji dị obere.
Maka akụkụ ya, ụda bụ ezigbo mma, dị ike ma doo anya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile. Ahụmịhe onye ọrụ ahụ enweghị afọ ojuju na-atụle itinye ego nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 250 nke LG na-ajụ anyị maka ọdụ a.
N'ikwu eziokwu, anyị na-eche ọnụ ọnụ na-efu m ihe egwu iji kwado, enweghị m ike ịchọta ebe ọ bụla karịa ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa maka ọnụahịa ndị ọzọ nke otu ọnụahịa ahụ, igwefoto anaghị apụta, ihuenyo ahụ dị mma na arụmọrụ zuru oke nke otu na-eme ka ọ dị ka nke ochie. Thatbụ na ọ nwere ike, ọ na-efu 240 (Njikọ Amazon) na enweghị m ike idowe ya dị ka ezigbo zụọ nhọrọ.
Onye edemede: 40%
Anya mara mma
Da dị ike ma doo anya
Ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu ihuenyo, ọ nwere ya
Ọ bụ ezigbo akara mkpisiaka
O nweghị ikike zuru oke ma nwee microUSB
Ihe mmetụta ya atọ erughị ka ọkọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » LG Q60 a bịarutere n'oge na-etiti etiti [AKWALKWỌ]
OnePlus leaked data onye ọrụ "n'amaghị ama" site na ngwa 'Shot on OnePlus'
EMUI 10: Ihe osise izizi nke mbụ